Symantec inogona kunge yakatyora rezinesi reGNU GPL pane yayo Norton Core Router | Linux Vakapindwa muropa
Mumakore achangopfuura, Linux yakave inozivikanwa kwazvo nemidziyo yakadzamidzirwa, iyo muzviitiko zvakawanda inoshandisa zvisiri pamutemo Linux kugadzira zvigadzirwa zvemakwikwi mukutyora marezinesi. Isu tatoziva kuti Linux yakaburitswa pasi peGNU GPL rezinesi, nezvose izvi zvinoreva, zvakanaka, zvinoita sekunge izvi rezinesi rinogona kunge richityorwa nemugadziri anozivikanwa: Symantec.
Ndo zvakaratidzwa naGoogle injiniya uye nyanzvi yekuchengetedza yeLinux. Zita rake ndiMateu Garrett uye akanongedza zvakanyanya kuchigadzirwa Norton Core Router sekutarisa yeiyi kutyorwa kwerezinesi nekushandisa Linux uye kusasangana nezvimwe zvinodikanwa zvinorehwa neGNU GPL rezinesi. Yakadaro router ine ichi chinoshamisa chimiro chinoshanda neinozivikanwa Linux-yakavakirwa system, iyo OpenWRT iyo mazhinji eaya akadzika midzi netiweki zvishandiso anoshandisa kushanda.
Symantec yakatora mukana we OpenWRT uye QCA Software Development Kit (QSDK), imwe yakavhurwa sosi chirongwa. Ose ari maviri sarudzo yakanaka yekuvaka chinokwikwidza chigadzirwa senge iyo Norton Core Router, asi dzimwe nguva, vagadziri uye vagadziri vemhando idzi dzezvigadzirwa vanobatsirwa nebasa renharaunda uye havaremekedze mamwe mamiriro Mune ino kesi, kuve pasi peGPLv2 rezinesi, zvaizoreva kuti Symantec inofanirwa kugovera iyo Norton Core Router kodhi nenyika, asi haina.
Ndiyo imwe yemamiriro ezvinhu e marezinesi anodzvinyirira seGPL maringe nekubvumidzwa kwakawanda seBSD. Ndosaka vamwe vakaita seApple vakasarudza masystem senge FreeBSD uye nezvimwe zvemaitiro avo, nekuti nenzira iyoyo vakavimbiswa kukwanisa kugadzira yakavharwa kodhi zvichibva pavari uye havafanirwe kuigovana.Tichaona zvinoita Symantec kune izvo Garrett awana, asi zvirokwazvo hachisi chinhu chitsva, zvakatoitwa uye zvinosuwisa, ndinotenda kuti vamwe vagadziri vacharamba vachidaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Symantec inogona kunge yakatyora rezenisi yeGNU GPL pane yayo Norton Core Router
6 Lightweight Web Browsers yeLinux